ICasa Luna yindlu entle egcwele umtsalane - I-Airbnb
ICasa Luna yindlu entle egcwele umtsalane
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguLucy
Ibekwe kwilali entle yaseBenidoleig le ndlu inegumbi lokulala eli-4 ineempawu ezininzi kunye nomtsalane Ibekwe kwindawo yakudala yelali enolwandle olumangalisayo kunye neembono zentaba ukusuka kwithafa.
Kukho amagumbi okuhlambela ayi-2 ekhitshini legumbi lokuhlala kunye ne-terrace
Beka entliziyweni yebhayisekile kunye neparadesi yokuhambahamba indawo ayinakuba ngcono. Le ndlu yelali ibuyiselwe ngothando yimizuzu eli-15 ukusuka kwiilwandle eziluhlaza. Ixhotyiswe ngokupheleleyo ngomatshini wokuhlamba umabonakude welinen yekhitshi kunye neetawuli
Le ndlu intle ibonelela ngeemfumba zobuntu kunye nomtsalane. Iingcango zivulekile, zityhila ubude bendlu yonke, ezi ziingcango zangaphambili ezake zavulwa ukuvumela amahashe ukuba angene kwigumbi elingasemva eliyindawo yepatio ngoku.
Eli gumbi lokulala line, indlu yokuhlambela emibini ehlala abantu abadala abane kunye nabantwana abathathu. Kukho iibhedi ezimbini zabantu abadala, kunye negumbi lesithathu lokulala elinebhedi enye, kunye negumbi lokulala lesine elineebhedi ezimbini.
Kumgangatho ophantsi ligumbi lokuhlala, igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela elineshawa, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nepatio.
Phezulu kukho elinye igumbi lokuhlambela elineshawa kunye namagumbi okulala ama-3, enye inebhedi enye, enye inebhedi ephindwe kabini kwaye okokugqibela ineebhedi ezigudileyo. Kumgangatho ophezulu kukho umnyango ophumela kwi-terrace enegumbi eliluncedo kwaye ukusuka apho unokubona ulwandle kunye nentlambo engezantsi.
Ipatio ivumela i-alfresco yokutyela enetafile kunye nezitulo eziphuma ekhitshini. Indlu inesitulo esiphakamileyo, ibhedi yokuhamba, iiDvd ezininzi kunye nezinto zokudlala zabantwana. Kukho izitepsi ezi-2 ezifakiweyo kunye ne-Tv enokubonwa simahla. Kukwakho namabhakethi kunye nemihlakulo, ii-inflatables kunye ne-arbal bands zokuthatha i-esto beach / pool.
Ibekwe kwiNtlambo yaseGirona, phakathi kwemithi yomnquma, iorenji kunye nealmondi, yilali yobuthongo yaseBenidoleig. Ibekwe iyure ukusuka eAlicante naseValencia, nokuba sisiphi na isikhululo seenqwelomoya sinokusetyenziselwa ukufikelela elalini.
I-Benidoleig inevenkile encinci apho unokuthenga khona izinto ezininzi, ikhemesti, icuba kunye neejenti zeendaba, indawo yokubhaka kunye nomthengisi weentyatyambo. Kukwakho nomatshini wemali emazantsi elali. Kwisikwere esikhulu kukho imivalo emibini ehlala rhoqo ngabantu basekhaya kunye nabangaphandle, ababonelela ngokutya kubandakanya i-tapas yendabuko. Ukuhamba ngemizuzu emi-2 ukusuka endlwini yindawo yokutyela edumileyo ye-El Temple. Kwiinyanga zasehlotyeni iitafile zibekwe ngaphandle kwi-allfresco yokutyela. Iyaxakeka ke ngoko ukubhukisha kuyacetyiswa.
Kumgama oziikhilomitha ezi-4 yindawo yokutyela edumileyo yaseCasa Pepita. I-Piscina Pitons, i-El Cid kunye ne-La Lloma zonke zikufuphi nelali kwaye zinika ukutya okumnandi. Ukhetho olubanzi ngakumbi, idolophu yasechwebeni yaseDenia ineendawo zokutyela ezininzi ezibonelela ngerayisi yendabuko kunye neetapas kukutya kwamaTshayina namaIndiya. Idolophu yakhiwe malunga nenqaba yakudala yamaMoor ekhanyiswa ebusuku isenza umlingo wobusuku baseArabia njengoko usitya phantsi kweendonga zenqaba, ecaleni kwe-marina.
Iqula lokuqubha eBenidoleig livulwa ukusuka ngoJuni ukuya kuSeptemba. Kukho ichibi elikhulu leemitha ezingama-25, kunye nelincinci labantwana abancinci ngaphandle kwalo. Iindleko yi-2 Euros ngosuku, kunye nokungena okungenamkhawulo.
Rhoqo ngoLwesine kukho imarike encinci kwisikwere, imizuzu emi-2 ukusuka kwindlu. Kuyathengiswa iziqhamo nemifuno, inyama nentlanzi. Imizuzu eli-10 ngemoto ukusuka elalini yidolophu yase-Ondara, apho unokufikelela khona kwiibhanki, kwiivenkile ezinkulu, isibhedlele/ugqirha kunye nevenkile enkulu yevenkile yaseMall de la Marina. Nge-40,000 square metres yendawo yokuthengisa, kukho iivenkile zempahla, iivenkile zezicathulo, iivenkile zeefowuni, ivenkile yeencwadi. Amagama ebhrendi aquka i-H & M, iZara, iLefties, iMango, iLevis kunye neBenneton. Kukwakho neekhefi ezininzi kunye neendawo zokutyela kunye nemiboniso bhanyabhanya emininzi ebonisa iifilimu zamva nje. I-mall yenza isiqabu kwiinyanga ezishushu njengoko ine-air conditioning epheleleyo.
Iindawo ezikufutshane neBenidoleig zibonelela ngeentsuku ezintle zokuphuma. 'Imiqolomba yeeKakayi' iLa Cueva De Las Calaveras ibekwe ngaphandle nje kwelali, kwindlela eya ePedreguer. Imiqolomba yafumana igama kumakhakhayi amaninzi awafunyanwa ngo-1768, kwaye abonisa umdla wezinto zakudala kunye nezinto zejoloji nezinto zobugcisa, indlela engaphakathi ingaphezulu kweemitha ezingama-300 ubude. Ngaphandle kukho ivenkile encinci yezipho kunye necafe.
Ukuqhuba kakuhle kwi-Altar Waterfalls kukufanelekile ukutyelelwa. Ukuhamba nge-1.5km ecaleni komlambo, udlula imithombo emininzi yemithombo evela ematyeni kukuthatha ukuya kwingxangxasi ebukekayo. Ungaqubha kumanzi acwengileyo, awaziwa ngaphambili ngokuba 'ngumthombo wezempilo' kwaye ubone umjelo wenkulungwane endala kunye nemisele isasetyenziswa. Kukwakho nepaki yedayinaso eAlgar yabantwana abancinci.
Kufuphi neBenidorm iindawo ezinomtsalane kuyo yonke iminyaka. I-Aqualandia, (ipaki yamanzi emnandi) iTerra Natura (ipaki yezilwanyana) iMundo Mar (ipaki yamanzi ezilwanyana) kunye neTerra Mitica (ipaki enkulu yokonwabisa) izidla ngowona ukhwelo kunye nezilayidi ezinkulu eYurophu. Kukho iKarting eMoriara nase-Olivia kunye nomtsalane wedayinaso yabantwana ecaleni kweziko lekarting e-Oliva.
Ukuhamba ngemizuzu engama-20 ukusuka eBenidoleig, kukuthatha ukuya kwintlambo yaseJalon, enemibono enomtsalane kunye neendawo ezimangalisayo. IJalon idume ngewayini zalapha ekhaya, kukho iibodegas (iiseli zewayini) apho ungenza isampulu yewayini ezohlukeneyo phambi kokuthenga. yonke iMigqibelo, iJalon ibamba imarike enkulu ethengisa izinto zakudala, iimpahla, izibuko zelanga, iibhegi kunye nokunye.
I-Pedreguer, ekwimizuzu eli-10 ukusuka endlwini, inevenkile enkulu, isikhululo sepetroli kwaye ibamba imakethi yeveki rhoqo ngeCawe. Abathengisi banikezela nge-bric a brac, iimpahla ezintsha nezisetyenzisiweyo, izityalo kunye neziqhamo ezitsha kunye nemifuno ethengiswa ngamafama asekuhlaleni.
Inqaba eseDenia inokutyelelwa kunye nohambo lwesikhephe mihla le kunye nohambo lokutshona kwelanga ukusuka kwizibuko laseDenia.
Iindawo ezingqonge iBenidoleig zinamathuba amangalisayo okuhamba kunye nokuhamba ngebhayisekile. ukusuka endlwini ungahamba ujikeleze ilali okanye uhambe uye 'kwinkampu' (ilizwe) ngokusebenzisa imithi yepine kwaye ujoje irosemary kunye ne-thyme phantsi kweenyawo zakho. Iingcango ezinkulu zokungena endlwini zivumela ukufikelela lula kwiibhayisekile ezinokugcinwa ngaphakathi.
ICosta Blanca ineelwandle ezingaphezu kwe-170 zeflegi eluhlaza ukukhetha kuzo. Ziyahluka ukusuka kwisanti ukuya kwilitye elinqabileyo, elifihlwe kwiinduli ezincinci, ezigqunywe ziindunduma, ecaleni kwamahlathi epine okanye phantsi kwamatye. Kukwakho neelwandle zeekite kunye nokusefa emoyeni kunye neelwandle ezirentisa iibhodi zokubheqa, ijet skis, kayaks kunye nezikhephe. Ulwandle olusondeleyo olusuka kwindlu yimizuzu eyi-15 yokuhamba ngedolophu yase-Ondara, enokubonwa kwi-terrace.
Ulwandle lwaseArenal eJavea lumnandi ebantwaneni njengoko kungekho mathontsi ngequbuliso kwaye abantwana banokudlala ngokukhuselekileyo kumanzi angekho nzulu njengoko unxweme luthambeka kancinci kulwandle olushushu. Ipromenade ineevenkile ezininzi, iikhefi, iibhari kunye neendawo zokutyela ezibonelela ngeentlobo ngeentlobo zokutya ukuze zilungele konke ukuthanda. Ebudeni beenyanga zasehlotyeni, ipromenade izaliswe zizitali zamagcisa ezithengisa ubugcisa bezandla.
I-El Portet eMoriara ilungile kubantwana, ngamanzi angekho nzulu kunye nolwandle oluncinci. Ubume be-El Portet buyamangalisa njengoko uqhuba ujikeleze indlela kwaye ubona amanzi acacileyo kwi-cove encinci esezantsi. Ukujonga elunxwemeni ziindawo zokutyela ezimbini ezibonelela ngesidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa, ukutya iitapas kunye nokunye ukutya. Ukuba ubhukishelwe kwangaphambili iPaella ingalungiswa kwaye ityiwe emva kokutshona kwelanga kunye neglasi yewayini ejonge elwandle.
Kwelinye icala leJavea yiCap De Nau ene-snorkelling emnandi, njengoko kwenza uCala Moraig kunye noCala els Pinets.
I-Benidoleig yindawo egqibeleleyo yokuphonononga iCosta Blanca, nokuba ujonge iholide yokuhamba, iholide yebhayisikile iholide yokuphumla elunxwemeni okanye iholide yosapho elungiselela wonke umntu.
Ukuba ungumthandi weGalufa, kukho iikhosi ezingama-25 ngaphakathi kweeyure zokuqhuba, ezintlanu kuzo zikumizuzu engama-30. I-Javea inezimbini, ikhosi eyaziwayo kumazwe ngamazwe angama-27-hole eLa Sella ethatha imizuzu engama-20. Kukho ezinye iikhosi ezinemingxuma eli-9 e-Mortar nase-Altea kunye ne-18-hole ye-Serve Ballesteros eyilwe ikhosi e-Olive Nova Golf club emalunga nemizuzu eli-15 ukusuka endlwini.
IBenidoleig yeyona ndawo ifanelekileyo ukuba ufuna ukuva inkcubeko yokwenyani yaseSpain.
I live in London with my family and work in property. I have been visiting Spain since a young child and fell in love with the village of Benidoleig. I have been coming here since I was 12 years old.
I have traveled and love learning about different cultures and meeting new people. I love swimming, cycling and walking but most importantly spending time with my amazing family.
Inombolo yomthetho: VT- 479113-A